Ekpere na -amaghị nwoke nke Fatima. ? Ọrụ ebube na Ike! [+]
Ekpere nye Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke nke Fatima; Na nkpa ọ bụla ị nwere, ị nwere ike bulite ekpere a.
Lovehụnanya na mmesapụ aka nke nwa agbọghọ nwanyị na-amaghị nwoke na ọtụtụ n'ime nnọchi anya ya dị ike nke ukwuu.
Ya, dika nne nke Dinwenu anyi Jisos Kraist na enyi nke Chukwu, onye okike nke ihe nile, puru ịrịọ anyi aririo n’eluigwe ma si otua nweta ihu ọma ma ọ bụ ọrụ ebube anyi chọrọ.
Enwere ike ikpe ekpere kwa ụbọchị, yana ezinụlọ, n'ụlọ, n'ọfịs ma ọ bụ naanị ahịrịokwu n'amaghi ama
Ihe dị mkpa bụ iji okwukwe tinye ya na ọ na-ege anyị ntị ma na oku a na-akpọ anyị ga-enyere anyị aka.
1 Ekpere diri Nwa Agbọghọ Na - amaghị nwoke Nke Fatima Onye bụ Nwa Agbọghọ Atụrụ ahụ nke Fatima?
2 Ekpere diri Nwa Agbọghọ Atụrụ nwanyị
2.1 Gịnị bụ ekpere nke Nwa Atụrụ nwanyị nke Fatima maka?
3 Kedụ mgbe m nwere ike ikpe ekpere?
4 Nwa agbọghọ a ọ ga-enyere m aka?
Ekpere diri Nwa Agbọghọ Na - amaghị nwoke Nke Fatima Onye bụ Nwa Agbọghọ Atụrụ ahụ nke Fatima?
A na-ekwu na na 1917, Francisco, Lucía na Jacinta hụrụ onye na-amaghị nwoke bụ ndị ọzụzụ atụrụ atọ nke Virgin nke Fatima.
Ihe a mere n'otu obodo a na-asụ Pọtugal nke nwere aha nwanyị na-amaghị nwoke.
Nkọwa ndị ọzọ na-adọrọ mmasị banyere akụkọ a na-egosi na mmụọ ozi a maara dị ka Angel de Portugal, gwara ndị ọzụzụ atụrụ nta otu afọ gara aga n'ebumnuche nke ịkwadebe ha maka ọdịdị nke nwanyị a na-amaghị nwoke.
Nwa agbọghọ ahụ kpughere ndị ọzụzụ atụrụ a ihe nzuzo atọ, nke ji nwayọ kpughee ndị ọzọ kwere ekwe.
A maara na nke ikpeazụ gosipụtara na 2000 site na Cardinal Ángelo Sodano.
Eziokwu bụ na mgbe ọ pụtara na mbụ, Virgin nke Fatima na-eso ọtụtụ puku ndị kwere ekwe niile ụwa, ndị mmadụ chọrọ ọrụ ebube na nwanyị a na-amaghị nwoke O nyewokwa ndị àmà kwesịrị ntụkwasị obi nke ike ya.
Dọkịta a gọziri agọzi, ị pụtara n'ihu ụmụ gị ugboro ugboro; Ọ ga-amasị m ịhụ gị, ịnụ olu gị ma gwa gị: Mama m, kuru m gaa Eluigwe.
Obi tukwasiri obi na ihu-n'anya gi, a nam ario Gi ka o nye m nke Ọkpara gi Jisos okwukwe di ndu, ọgụgụ isi ka m mara ma hu ya n’anya, nwee ntachi obi na amara ijere Ya ozi na umunne m, na otu ubochi kari ime ka gi na ya di n’elu-igwe.
Nna anyi ha, Nwanne Ekele Maria na otuto.
Mama m, a na m arịọ gị maka nne na nna m, ka ha wee nwee ike ibikọ ọnụ n'ịhụnanya; maka ụmụnnem, ezinulo na ndi enyi m, ka unu wee nwee ike ibikọ ọnụ na ezinaụlọ otu ụbọchị anyị ga - eso gị nwekọrịta ebighi ebi.
A na m arịọ gị n ’ụzọ pụrụ iche maka ntụgharị nke ndị mmehie na udo nke ụwa; maka umuaka, nke mere na odighi enyemaka Chineke na ihe dị ha mkpa maka otu ahụ, otu ụbọchị nweta ndụ ebighi ebi.
Nna anyi, ekele Maria na otuto Ohuru nnem, a ma m na i ge nti, i gha enweta m ihe ndi a, aju m ajuju gi, nihi aju m ihunanya gi n’ebe Nwa gi Jisos no.
Nnem, lee nwa gi nwoke, buru nne m! Odi obi obi Maria, buru nzoputa m!
Ekpere nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke Fatima bụ ọrụ ebube.
Na Akwụkwọ Nsọ, Nna nke elu-igwe kwere nkwa ịza ekpere anyị nile oge ọ bụla ejiri okwukwe na obi ha mee ya, ya bụ, site n'obi eziokwu.
N'ihe banyere ekpere a na-ekpegara nwatakiri nwanyi nke Fatima a nkwa a dikariri ike karie, nihi na anyi na ekwu maka nnochi anya otu nwa agbogho ahu bu Meri onye bu nne Jisos.
Na mgbakwunye na nke a niile bụ eziokwu na e nyefere Virgin a ụmụaka atọ ma si ebe ahụ gakwuru ndị mmadụ, dị ka anyị, nwere mkpa ma chọọ enyemaka Chineke na ndụ ha.
Mgbe ahụ anyị ga - ekwenye na dịka ọ mere n'oge gara aga ọ nwekwara ike ime ugbu a.
Gịnị bụ ekpere nke Nwa Atụrụ nwanyị nke Fatima maka?
Ekpere nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke Fatima nwere ike inwe ọtụtụ ebumnuche maka oge ụfọdụ na ndụ anyị, yabụ ike nke ekpere nwere ike ikpebi naanị otu ihe.
Anyị nwere ike kwuo nke ahụ, dịka ekpere niile, otu a nwekwara ike enyemaka mgbe ụfọdụ anyị chọrọ ya.
Ma nnweta ọgwụgwọ ọfụma, maka nchebe ma ọ bụ maka arịrịọ ọ bụla, ekpere ga-arụ ọrụ dị ukwuu mgbe niile.
Azịza ya nwere ike iwe ogologo oge iji rute, n’ihi na ịnụ ọkụ n’obi na-ama mgbe ọ ga-agọzi anyị, ihe dị mkpa abụghị ka okwukwe anyị daa ma jide n’aka na ekpere a na-emekwa ka anyị nwee udo n’etiti oke ide mmiri nke anyị na-enwe, ma nwee ike ime ka anyị ghọta ọtụtụ ihe Anyị aghọtabeghị tupu mgbe ahụ.
Enwere ike ikpe ekpere n’ụzọ ọ bụla, n’agbanyeghi na enwere ike ịhazi ndị novenate mgbe niile, na-ekpe ekpere n’ime ezinụlọ ma ọ bụ oge ekpere pụrụ iche.
Agbanyeghị, enwere ike ịhazi ụdị ndị a n'ọtụtụ ụzọ na enwere ike ịme ya otu ndi enyi ma obu ezinulo.
N'oge a enwere ndị na-amaghị mgbe ụfọdụ ikpe ekpere pụrụ iche, na nke a ị nwere ike jiri okwukwe na-ekpe ekpere dị mfe, na-eji oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Site n'okwukwe, anyị ga-ejide n’aka na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na-enyere anyị aka.
Nwa agbọghọ a ọ ga-enyere m aka?
Ee, oge obula choro ya.
Ya onwe ya dika ezigbo nne n’eduzi umuaka ya ma nyekwa anyi aririi anyi nwere n’ime obi anyi.
Offọdụ ndị anyị amaghị, kama anyị chọrọ ngwa ngwa.
O nwere okwukwe na ekpere ọrụ ebube na Virgin nke Fatima.
Ekele diri nwa agbọghọ nke Juquila
Nwa nwanyi nke Carmen
Nwa nwanyi nke Guadalupe nyere ekpere di ebube